FSX iri kushungurudza paunenge uchitanga Windows XP / Vista / 7 / 8 / 10-64 mukusununguka kwemhepo uye MP Sessions. Pane kugadzirisa here? - Rikoooo
FSX ari kaatuu apo achimhanya Windows XP / Vista / 7 / 8 / 10-64 murusununguko ndege uye MP Sessions. Pane imwe parumananzombe?
Danho 1: DownloadUIAutomationCore.dll
Step 2: rongonyora ari ZIP faira uye woisa abudisa UIAutomationCore.dll muna mudzi FSX wako chokugadza folder faira fsx.exe anogara. Iva nechokwadi FSX haasi kumhanya.
Shure chiito ichi, kutanga FSX uye uchawana kuti nokuchinja maonero muna FSX, asisiri pakupedzisira hunokonzera FSX kuti anorovera.
Pasina aigadzire ichi, FSX akusungirire uyewo uchava "nenguva panze" nenzira Multi mutambi chapera. Usashandisa zvimwe shanduro UIAutomationCore.dll, sezvo shanduro iyi ndiyo chete shanduro zvichaita kumisa kubonderana kwemotokari.